China Sexy Mmekọahụ Womenmụ nwanyị Vibrator | OMYSIMBA Nrụpụta na Factory | OMySimba
Nke a mmekọahụ vibrator n'ihi na ndị inyombụ ụzọ ọhụrụ ị ga-esi enweta atụmatụ achọrọ nke ngwa ahịa okomoko dị elu karịa ọnụ. Site na njikwa injinịa ya kachasị elu, ọ nwere ike ịnye ụda dị egwu na njirimara na-eguzogide mmiri, ụdị aghụghọ na agba mara mma na-emeghe ọnụ ụzọ nke obi ụtọ nye onye ọ bụla.
Oke bekee vibrators na-enye a sọrọ na-akpali akpali ahụmahụ dị ka ihe ọ bụla ị na-emetụbeghị. Ihe mkpuchi ya nke na-akpali akpali na-agba gburugburu gburugburu ebe a na-agba ume, nke na-akụ ebe niile kwesịrị ekwesị. Lọ ọrụ na-agbanwe agbanwe ma dịkwa nro na-agbanwe agbanwe nwekwara ike ịnọ n'ọnọdụ maka mmụba G-Spot. Mmiri na-eguzogide mmiri, ma na-agbanye ụgwọ ọkụ. Ngwunye a na oke bekee na-arụ ọrụ kwekọrọ na mkpa na ọchịchọ gị. Nkwado siri ike nwekwara bọtịnụ silicone nke na-achịkwa njirimara on / off na ọrụ ọrụ niile.
E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike inye 42 ℃ kpo oku mgbe ị na-eji ya.
Mmekọahụ maka ụmụ nwanyị iji:
Ike & ịgbachi nkịtị - Iri abụọ dị iche iche ọrụ na ike mgbe na-agbachi nkịtị iji jiri uche.
Mfe iji - Nnukwu ụzọ abụọ dị mfe iji pịa bọtịnụ na-achịkwa ihe egwuregwu ahụ, bọtịnụ na-enwu maka ojiji n'ọchịchịrị.
DUAL STIMULATION - Isi dị larịị, nke dị gburugburu nke osisi ahụ na-agagharị maka mkpali G ma tinye ya maka nkasi obi. A na-eme ka onye na-eme ihe na-eme ihe pụrụ iche iji dabara nke ọma na klọtu maka ahụmịhe siri ike ma tokwa elu.
AKWREKWỌ AKWREKWỌ - Ahụ zuru oke nke silicone dị elu. Ọ dị mfe ihicha ma debe.
VERSATILE MAKA IHE ỌZỌ - Soft na mgbanwe maka ọnọdụ zuru oke iji mejuo afọ ojuju.
42 ℃ kpo oku n'oge eji eme ihe na-enye gị ezigbo mmetụta .Chọpụta ihe anyị na-eme vibrator dildo ma ọ bụrụ na ị chere na a ụmụ nwanyị na-eji vibrator bụ kpọmkwem ihe ị na-achọ!
Aha ngwaahịa OMySimba Sexy Mmekọahụ Womenmụ nwanyị Vibrator
Nokpụrụ No OMS-001-Ana
Nha (cm) 214 * 67mm
Agba Red mmanya / acha odo odo
Ibu (n'arọ) 0.45kg
Telescopic siwing adiana mode
Ọrụ kpo oku (42 ℃)
1.Etu ị ga - esi họrọ ihe mkpali
2.Etu esi eji igwe eji egwu egwu
3.Olee otú Vibrator Si Arụ Ọrụ
4.Etu esi eji orụ eji eji ebili mmiri
Nke gara aga: Wand Massager jụụ | OMYSIMBA
Osote: G ntụpọ vibrator ụmụ nwanyị ji egwuri egwu ụmụaka | OMySimba
kacha mma clitoral vibrator
kacha mma g ntụpọ vibrator
nwata nwanyi jijiji
Oke oyibo Mmekọahụ
Mmekọahụ Mmekọahụ Maka Womenmụ nwanyị
ike kacha vibrator
oke oyibo vibrator
masturbation onwe onye